samsung galaxy s21 + inowana kuderedzwa kukuru pamberi peamazon prime day
Kuru Nhau & Ongororo Samsung Galaxy S21 + inowana mutengo wakakura pamberi peAmazon Prime Day
Samsung Galaxy S21 + inowana mutengo wakakura pamberi peAmazon Prime Day
Kunyangwe isu tichitarisira vamwe zvisingaite zvakanaka Samsung Galaxy S21 Prime Day madhiri , mikana ndeyekuti ichave ichiwanikwa kwenguva shoma kwazvo uye havazi vazhinji vanozotora mukana wemutengo wakaderera.
Ichi ndicho chikonzero isu & apos; tichipa vatengi mukana wekutora iyo Galaxy S21 + pamutengo weyakajairwa Galaxy S21 pamberi Amazon Prime Day 2021 inotanga gare gare mwedzi uno . Amazon yadonhedza mutengo weiyo Galaxy S21 + ne $ 200, asi pane & apos; s kubata.
Vatengi vanoda kubatsirwa kubva ku20% dhisikaundi vanofanirwa kusarudza iyo Phantom Nhema vhezheni sezvo mamwe mavara maviri (Phantom Sirivheri nePhantom Violet) aren & apos; vasina kubviswa. Padivi rakajeka, iyo 5G -yakagoneswa Samsung Galaxy S21 + inouya yakavhurwa, uye nekuti iyi ndiyo vhezheni yeUS, ichashanda nevatakuri vese vakuru munyika.
Chinhu chakasarudzika ndechekuti iyo Samsung Galaxy S21 + 5G haitsigire eSim muUnited States. Zviripachena, iwe & apos; munofanira kukurumidza nekuti mutengo wakanaka zvekuti isu tinotenda kuti chibvumirano chinonyangarika munguva pfupi iri kutevera.
Unofanira kutenga iyo Samsung Galaxy Cherechedzo 10+ muna 2020?
Target Nhema Chishanu madhiri ari kunze: kuchengetedza kukuru paGreen Note 8, iPhone 8, zvipfeko